I-Casa I by El Patio de Toledo. Iikhilomitha eziyi-200 ukusuka kwiCathedral! - I-Airbnb
I-Casa I by El Patio de Toledo. Iikhilomitha eziyi-200 ukusuka kwiCathedral!
UKUPAKA. Iflethi elungiselelwe kuphela iindwendwe iimitha eziyi-200 ukusuka kwi-Toledo Cathedral, enazo zonke izinto ezinokusetyenziswa. Elona nani likhulu labantu abayi-6. Inamagumbi okulala ayi-2, amagumbi okuhlambela amabini neWiFi yasimahla, embindini wedolophu endala ekwindawo entle eneyadi eqhelekileyo ye-Toledano, enezinto ezishiyekileyo zaseRoma ze-S II d. C, uhamba nje imizuzu eyi-3 ukusuka kwisakhiwo secawa kwindawo ethe cwaka.
INDAWO YOKUPAKA EBHATALELWAYO yabucala kunye NOKUBHUKISHA KWANGAPHAMBILI (cela ukufumaneka).
Le ndlu ine:
- I-WIFI iqukiwe okanye into ebhetele, ibala elihle eliqhelekileyo apho unokuphumla khona uxolo ucinga ngezinto zokwakha.
- Itafile yokutyela kunye ne-protagonist yendlu zidityaniswe kwigumbi lokuhlala kwaye zilungele ukwabelana ngetafile. Igumbi lokuhlala elinesofa ekwayibhedi etofotofo kunye ne-TV.
- Umatshini wokwenza ikofu weNespresso
-2 Amagumbi okulala, anebhedi elala abantu ababini.
- igumbi lokuhlambela eliyi-1 elineshawa (ngaphakathi kwigumbi elikhulu) apho unokonwabela ishawari enomtsalane nodonga oludala lwamatye.
Ishawari eyi-1 Igumbi lokuhlambela elinebhafu epheleleyo. Kumagumbi okuhlambela kukho i-gel/ishampu, into yokuthambisa iinwele, isixhobo sokomisa, iphepha langasese, isepha yezandla neetawuli zezandla.
-Ikhitshi elinento yonke (i-hob, ioveni, ifriji, umatshini wokwenza ikofu waseItali, i-toaster, ipani yokufraya, iimbiza, izinto ezisisiseko zasekhitshini...)
QAPHELA: -Ukupaka akuqukwanga kwixabiso kwaye ukuba kuyafumaneka, imali eyongeziweyo iza kutsalwa xa ubhalisa xa ufika.
4.85 · Izimvo eziyi-239
Embindini weToledo, kukho indawo ethe cwaka nekhuselekileyo.
Siza kukuhoya ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho kwaye ungaqhakamshelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo okanye ukuphazamiseka onokuba nako! Xa ukubhukisha kuqinisekisiwe, siza kukuthumelela yonke inkcazelo eneenkcukacha zokubhalisa xa ufika.
Siza kukuhoya ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho kwaye ungaqhakamshelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo okanye ukuphazamiseka onokuba nako! Xa ukubhukisha kuqinisekisiwe, siza kuk…
Inombolo yomthetho: 45012320209